Kioba: Tsingerintaona Faha-55 Taonan’ny 26 Jolay 1953 · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 29 Jona 2018 11:11 GMT
Tao Kiobà tamin'ny taona 1953, teo amperin'ady hanohitra ny jadona nataon'i Fulgencio Batista izay nahazo tohana tamin'ny fiarovan'ireo Amerikana, nitarika vondrona iray nisy an'ireo tanora revolisionera i Fidel Castro nandritra ny fanafihana ny Toby Moncada tao Santiago. Ankehitriny io hetsika io dia fantatra amin'ny maha-fiandohan'ny Revolisiona Kiobàna azy.
Tamin'ny faran'ny herinandro, ny 26 jolay 2008, nankalaza ny tsingerintaona faha-55-an'io fanafihana io i Kiobà, fety notarihan'i Raul, rahalahy sady mpandimby an'i Fidel, amin'ny maha-filoha Kiobàna azy.
Mamintina amin'ny fomba samihafa ny anton'ireo fankalazana ireo ny 1Click2Cuba:
Androany 26 jolay 2008, efa 55 taona izay ny filoha Raul Castro,sy Fidel rahalahiny ary ny tarika iray an'ireo mpikomy misaringom-borodamba, no nitarika fanafihana feno fahasahiana, nanomboka araka izany ny revolisiona izay nanova nosy iray, ary izao tontolo izao koa niaraka taminy.
Mialoha an'ireo fankalazana, ny blaogera matanjaka (mipetraka ao La Havane), dia nanoratra lahatsoratra iray nametrahany fanontaniana momba ny hafatra izay mety ho nampitain'ny kabarin'i Raul Castro:
Tsy ho faly hihaino ny fanambaràna an'ireo fepetra vaovao fotsiny isika Kiobana, miomana ny hanaporofo isika mikasika izay kely vita tao anatin'ny roa ambinifolo volana farany. Tapitra ny vanimpotoanan'ireo fampanantenana sy ireo vahaolana mahagaga mba hamaranana ny maha tany andalam-pandrosoana antsika. Sahala amin'ny toa nanomboka ny fianjerany ilay kabary politika. Saingy tsy midika izany fa indray andro any, dia higadona an-tseranana izy. Mitohy manamory fiaramanidina hatrany ilay lehilahy manana ny fahefana feno, raha toa tsy misy na iray aza manao fanambaràna amin'ireo fanamafisam-peo, raha tazonintsika ny haavo mety na raha toa efa andalam-pianjeràna isika, raha mbola mety amintsika ny rivotra na raha toa efa hipoaka ny motera. Fahanginana tokana, indraindray tapatapahan'ireo antso ho fanarahana fitsipika sy fanaovana sorona ny tena, no mivoaka amin'ireo fanamafisam-peon'io fiaramanidina IL-14 tamin'ny vanimpotoana sovietika io.
Taorian'ny kabary, nihetsika ireo blaogera hafa. Namorona famintinana vaovao mivaka an-gazety ahitàna an'ireo fanehoankevitra tamin'ny kabarin'i Castro ny Child of the Revolution [amin'ny fiteny angilisy], norakofan'ireo media mahazatra, gazety izay famintinana izay anehoany fa arakaraky ny hiovàn'ny zavatra no mainka mampijanona azy ho toy ny teo ihany.
Ninety miles away… in another country [amin'ny fiteny angilisy] tsy afaka ny hangina mikasika ny lohahevitra iray mipongatra ao anatin'ilay “kabary mirehidrehitra”:
Tao anatin'ny kabary tamin'ny 26 jolay tamin'ny taona lasa, niainga tamin'ny lohahevitra mikasika ny ronono i Raul, fikisahana iray izay tsy nomarihan'ireo media, saingy angamba ve mety noho ny fomba fiteny. Nefa, saika ireo kiobàna rehetra voalazan'ireo media no nitaraina fa tsy manana ronono intsony. Sahala amin'ny hoe nahenany ireo hetahetany tamin'ity taona ity.
Tamin'ity taona ity, ny lohahevitra niverina saingy somary menamenatra dia ny… mikasika ny rano. Voatondro hifarana tamin'ny taona 2010 ny fantsondrano lehibe tao Santiago, tahaka ny filazàna hoe rehefa hanana fitonoana mofo ireo kiobàna..
Navoakan'ny haiti-cuba-venezuela>analysis sy ny The Cuban Triangle manontolo ny kabary, ity farany izay nanao fanamarihana fa voalaza ao anatiny hoe “tsy misy tondrozotra” mba hametrahana amin'ny toerany an'ireo tetikasan'i Raul Castro”:
Castro, na dia nampiseho fohifohy an'ireo vokatry ara-toekarena mivaingana sasantsasany aza (fitomboan'ny fizahantany, fahombiazan'ny fitaterana), dia tsy nahitan-teny raha vao resaka ara-politika izay mety hanampy amin'ny fiatrehana an'ireo fanamby izay nofaritany tamin'ny fomba manjavozavo – ny fahanteran'ny mponina, ny fihenan'ny hery miasa, ny rafitra fampiasana vola roa. Ary mbola tsy dia naneho ihany koa izy fa, sahala amin'ny resaka fambolena, mitady an'ireo fomba hiovàna politika ihany koa izy mba hanalalahana an'ireo angovo mpamokatra mety hiteraka fitomboana sy asa.
Mifanohitra amin'izay, nalefa ny filazàna iray mba hanomanana antsika hiaina fotoan-tsarotra…
Ifampizaràn'ilay blaogera espanola, Alejandro Armengol, Cuaderno de Cuba io fahatsapàna io [amin'ny fiteny espanolà]:
Nanome hevitra iray amin'ny lalana mbola mila diavina hivoahana mankany amin'ny demokrasia sy ny toe-karena ihany koa ity kabary ity… Mamela fanantenana kely ho an'ny fiampitàna tsikelikely ny faritra tazamaso omen'ilay nosy. Mba tsy ho izay voalaza izay no tanteraka dia mitohy mivoaka aminà endrika vaovao avy amin'ny fanovàna sy mandona mankaminà fanovàna miadana ireo safidy azo raisina, saingy mbola mitoetra misoko ùmangina ny loza mety hisian'ny korontana ao anatina toe-javatra tsy ahitan'ny mponina fanantenana.
Ampitahainy ihany koa “ny firehankevitry ny filoha vaovao hampiseho ny ‘ara-drariny hatramin'ny fotony’ ho fanamarinana fototra ho an'ny governemanta ao La Havane”, amin'ny “tetikady noraisin'ilay espaniôla mpanao didy jadona , Francisco Franco, efa taona maro lasa izay, izay nampiasa ireo fomba tahaka izany mba hijanona eo amin'ny fitondràna nandritra ny fotoana lava: ny fandreseny mandritra ny ady an-trano tao Espanà no niantoka ny maha-manjaka tokana azy”.
Ny Uncommon Sense [amin'ny fiteny anglisy] mahita ny tena lova avy amin'ny 26 jolay ho toy ny famoizana ain'olona tsy misy fitsaharany nateraky ny Revolisiona kiobàna, raha toa i Yoani Sanchez, izay miaina eo ambany fitondrana naorin'io revolisiona io, manamafy fa:
Izahay dia tsy miandry mihitsy tsingolo-batita eny amin'ny rivotra, na vatomamy mba hanampy anay handresena ireo savorovoro. Izay tena tadiavinay marina, dia mpanamory manana fahasahiana hilaza aminay izay hosedrainay, dia anjaranay avy eo no manapaka hevitra amin'izay mety ho tohiny. Tsy nilainay akory io kabary io, ny sabotsy, mba hampiononana anay mialohan'ny hitsingevananay eny amin'ny rivotra ; famelabelarana mazava iray no mety nilainay momba ny ahoana sy ny rahoviana no hiondrana ho anaty fiaramanidina iray hafa.